Madowgan Aasiya Madow wuxuu jecel yahay Omelet, Facebook, iyo Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Madowgan Aasiya Madow wuxuu jecel yahay Omelet, Facebook, iyo Dalxiiska
Safarka Dalxiiska • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Khao Yai orso madow wuxuu raacayaa sankiisa
Meel lagu iibiyo cuntada oo ku taal dhagaxa Pha Trom Jai ee Beerta Qaranka ee Khao Yai, muuqaal fiidiyow ah orso madow oo Aasiya ah oo loo jiiday udugga omelet -ka wax lagu kariyo ayaa fayras noqday.
Waxa kaliya oo ay qaadatay waxay ahayd in qof qabsaday bahalka fiidiyowga ah uu ku dhajiyo baraha bulshada si uu dalxiisayaasha uga dhigo inay qayb ka noqdaan qorshayaasha socdaalkooda maalinlaha ah.
Dalxiisayaal aad u tiro badan ayaa imanaya oo madaxa beerta ku khasbanaaday inuu xaddido tirada aaggaas hal mar.
Khao Yai wuxuu caan ku yahay sidii loogu soo bandhigay filimkii Leonardo Dicaprio, “The Beach”.
Dalxiisayaal badan ayaa aaday buurta Pha Trom Jai, badankooduna waxay sheegeen inay arkeen qoraal Facebook ah oo ku saabsan bahasha madow ee Aasiya oo ay soo jiidatay omelette goob cunto oo ku taal dhagaxa, waxayna ogaadeen in dhagaxu caan ku yahay muuqaal qurux badan inta lagu jiro xilli roobaadka, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay maalin ka dhigaan.
Sawirada bahasha madow ee Aasiya ayaa ku fiday sida dabka oo kale waxayna keentay “Khao Yai Fever,” ayuu yiri Mr. Adisak Pusitwongsanuyut, madaxa beerta Khao Yai National Park.
Wuxuu sheegay inay u dhaqaaqeen inay xaddidaan booqdayaasha dhagaxa ka dib markay arkeen koror aad u badan oo dalxiisayaasha soo jiita goobta.
Caaqilku wuxuu xaddidayaa tirada dadka soo booqda goobta beerta qaranka maadaama “Khao Yai Fever” ee baraha bulshada ay dadka ku kicineyso inay u soo jiitaan dalxiiska dabiiciga ah iyo qulqulka dadka dartiis, waxay sare u qaadeysaa walaac ku saabsan suurtagal COVID-19 dillaacay.
Meesha dhagaxa ah, tirada baabuurta soo booqda waxay ku koobnayd 30, tan mootooyinka martida ilaa 50, iyo baaskiiladaha martida ilaa 30 mar, ayuu yidhi, laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha. Maalmaha fasaxa iyo maalmaha ciidaha, oo sida caadiga ah ay arkaan soo -qulqulayayaasha soo booqda, saacadaha furitaanka beerta waxaa loo qaybiyey 5 waqti oo mas'uuliyiinta baarkinku ay qiimeyn karaan oo go'aamin karaan meel kasta oo la siiyay inta baabuur ee loo oggolaan doono waqti kasta.
Khao Yai waa dhowr saacadood waqooyi -bari Bangkok waxaana lagu soo bandhigay filimka “The Beach.” Waxa xiiso leh, xiddigga “The Beach,” Leonardo DiCaprio, wuxuu sii waday inuu mar dambe sameeyo filim cinwaankiisu yahay “Qaddarinta,” oo ah filim ku saabsan soohdinta oo loo daayay inuu dhinto ka dib markii uu jiiray orso waalan. Kaalin uu ku guuleystay Oscar -kiisii ​​ugu horreeyay oo ahaa Jilaaga ugu Fiican, ka dib markii uu hore u koray 101 abaalmarino kale 252 magacaabid.
Kayntan iyo cawska of Beerta Khao yai dhererkeedu wuxuu gaarayaa 2,000 kiiloomitir oo laba jibbaaran waxaana lagu yaqaanaa 50 kiiloomitir ee socodka iyo baaskiilka iyo biyo -dhacyada quruxda badan.